Chipo ChaMwari Cherusununguko Rwekusarudza | Yokudzidza
Koshesa Chipo Cherusununguko Rwekusarudza
Nei Kuva Nemwero Kuchiri Kukosha?
Unogona Kuramba Uine Mwero Paunoedzwa
‘Zvinhu Izvi Zvipe Varume Vakatendeka’
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Nharireyomurindi—Yekudzidza | January 2017
“Pane [mweya] waJehovha, pane rusununguko.”—2 VAK. 3:17.
NZIYO: 62, 65
Jehovha akapa mumwe nemumwe wedu chipo chipi chinokosha?
Kushandisa kwatinoita rusununguko rwekusarudza kungaratidza sei madiro atinoita Jehovha?
Tingaratidza sei kuti tinoremekedza zvisarudzo zvevamwe?
1, 2. (a) Vanhu vane maonero api akasiyana-siyana panyaya yerusununguko rwekusarudza? (b) Bhaibheri rinotidzidzisei nezverusununguko rwekusarudza rwatiinarwo, uye mibvunzo ipi yatichaongorora?
MUMWE mukadzi paaifanira kusarudza zvekuita, akaudza shamwari yake kuti: “Usaita kuti ndifunge, chingondiudza zvekuita. Ndizvo zviri nyore.” Mukadzi uyu aiona zviri nani kuti audzwe zvekuita pane kuti ashandise chipo chinokosha chaakapiwa neMusiki wake, chipo cherusununguko rwekusarudza. Ko iwe unofarira kusarudza wega here, kana kuti unoona zviri nani kuti vamwe vakusarudzire? Unoonawo sei nyaya yerusununguko rwekusarudza?
2 Vanhu vakabvira kare vachitaura zvakasiyana-siyana nezvenyaya iyi. Vamwe vanoti hakuna chinonzi rusununguko rwekusarudza, uye vanoti zvose zvatinoita zvakafanorongwa naMwari. Vamwewo vanoti rusununguko chairwo rwekusarudza runongovapo kana tichikwanisa kuita chero zvatada. Zvisinei, kuti tinzwisise nyaya iyi zvakanaka, tinofanira kutarisa zviri muShoko raMwari, Bhaibheri. Nei tichifanira kudaro? Nekuti rinotaura kuti Jehovha akatisika tiine rusununguko rwekusarudza zvatinoda. (Verenga Joshua 24:15.) Bhaibheri rinopindurawo mibvunzo yakadai seyekuti: Tinofanira kushandisa sei rusununguko rwedu rwekusarudza? Rune parunogumira here? Kushandisa kwatinoita rusununguko rwekusarudza kunoratidza sei madiro atinoita Jehovha? Tingaratidza sei kuti tinoremekedza zvisarudzo zvevamwe?
TINODZIDZEI KUNA JEHOVHA NAJESU?
3. Jehovha anoratidza muenzaniso upi panyaya yekushandisa rusununguko rwake?
3 Jehovha chete ndiye ane rusununguko rusina parunogumira, asi tinogona kudzidza kubva pamashandisiro aanoruita. Semuenzaniso, akasarudza vaIsraeri kuti vave vanhu vezita rake, ‘pfuma yake chaiyo.’ (Dheut. 7:6-8) Jehovha haana kungoerekana aita chisarudzo ichocho. Akanga achizadzisa zvaakanga avimbisa shamwari yake Abrahamu mazana emakore akanga apfuura. (Gen. 22:15-18) Uyezve, Jehovha agara achishandisa rusununguko rwake rwekusarudza zvine rudo uye zvakarurama. Izvi zvinooneka pamarangiro aaiita vaIsraeri, avo vaigara vachisiya kunamata kwechokwadi. Pavaipfidza zvechokwadi, Jehovha aivaratidza rudo nemutsa, achitaura kuti: “Ndichagadzirisa kusatendeka kwavo. Ndichavada ndisingatumwi nomumwe munhu.” (Hos. 14:4) Paakaita izvi, Jehovha akaratidza muenzaniso wakanaka pakushandisa rusununguko rwekusarudza kuti vamwe vabatsirike.
4, 5. (a) Ndiani akatanga kupiwa chipo cherusununguko rwekusarudza uye akachishandisa sei? (b) Mumwe nemumwe wedu anofanira kuzvibvunza mubvunzo upi?
4 Jehovha paakatanga mabasa ake ekusika, akasarudza kupa ngirozi nevanhu chipo cherusununguko rwekusarudza. Akatanga kupa chipo ichi kuMwanakomana wake wekutanga, “mufananidzo waMwari asingaoneki.” (VaK. 1:15) Kunyange asati auya pasi pano, Jesu akasarudza kuramba akavimbika kuna Baba vake uye haana kubatana naSatani pakupandukira Mwari. Paakanga ava panyika, Jesu akashandisa rusununguko rwake rwekusarudza kuti akunde miedzo yaSatani. (Mat. 4:10) Paainyengetera nemwoyo wose usiku hwekupedzisira asati afa, Jesu akaratidzazve kuti ainge akatsunga kuita kuda kwaMwari. Akati: “Baba, kana muchida, bvisai kapu iyi kwandiri. Kunyange zvakadaro, kuda kwangu ngakurege kuitwa, asi kwenyu.” (Ruka 22:42) Tinogona here kutevedzera Jesu pakushandisa rusununguko rwedu rwekusarudza kuti tikudze Jehovha uye kuti tiite kuda kwake?
5 Hongu tinogona kumutevedzera, sezvo takasikwawo nemufananidzo waMwari. (Gen. 1:26) Kunyange zvakadaro, rusununguko rwedu rune parunogumira. Hatina rusununguko rwakafanana nerwaJehovha. Shoko raMwari rinotsanangura kuti rusununguko rwedu rune parunogumira uye kuti hatifaniri kupfuura miganhu yatinoisirwa naJehovha. Semuenzaniso, madzimai anotarisirwa kuti azviise pasi pevarume vawo uye vana pasi pevabereki vavo. (VaEf. 5:22; 6:1) Miganhu iyi inoita kuti tishandise sei rusununguko rwedu rwekusarudza? Maonero atinoita miganhu yacho achaita kuti tiwane upenyu husingaperi kana kuti kwete.
KUSHANDISWA KWERUSUNUNGUKO RWEKUSARUDZA
6. Taura muenzaniso unoratidza kuti zvakakodzera kuti rusununguko rwedu ruve nemiganhu.
6 Kuva nerusununguko rwekusarudza rune miganhu kusununguka chaiko here? Ehe! Nei tichidaro? Miganhu inoiswa parusununguko rwevanhu inovachengetedza. Semuenzaniso, tinogona kushandisa rusununguko rwedu rwekusarudza kuti tiende kuguta riri kure tichityaira. Asi taizonzwa takachengeteka here tichifamba mumigwagwa isina mitemo, munobvumirwa vanhu kumhanyisa motokari zvavanoda kana kutyaira vari kudivi ravanoda? Kwete. Miganhu inodiwa kuti tose tive nerusununguko rwechokwadi. Kuti tionezve uchenjeri hwekushandisa rusununguko rwedu tisingadariki miganhu yakaiswa naJehovha, ngationei mienzaniso yemuBhaibheri.
7. (a) Chipo cherusununguko rwekusarudza chaisiyanisa sei Adhamu nezvimwe zvisikwa zvaiva muEdheni? (b) Tsanangura zvimwe zvakaitwa naAdhamu achishandisa rusununguko rwake rwekusarudza.
7 Paakasika munhu wekutanga Adhamu, Mwari akamupa chipo sechaakapa zvisikwa zvake zvekudenga, chipo cherusununguko rwekusarudza. Asi haana kupa mhuka chipo ichi. Adhamu akashandisa sei zvakanaka rusununguko rwake rwekusarudza? Mhuka dzakatanga kuvapo munhu asati asikwa. Asi Jehovha akasiyira Adhamu basa rekudzitumidza mazita. Mwari “akatanga kuzviunza kumunhu kuti aone kuti aizotumidza chimwe nechimwe kuti chii.” Pashure pekunge Adhamu acherechedza mhuka imwe neimwe achiipa zita rakakodzera, Jehovha haana kuchinja mazita ainge asarudzwa naAdhamu. Pane kudaro, “chero zita raipiwa mweya mupenyu nomunhu, ndiro rakava zita rawo.”—Gen. 2:19.
8. Adhamu akatadza sei kushandisa zvakanaka rusununguko rwekusarudza, uye zvakaguma nei?
8 Zvinosuwisa kuti Adhamu haana kugutsikana nebasa raakanga apiwa naMwari rekurima nekuchengetedza paradhiso yepanyika. Haana kugutsikana nerusununguko rwake rwakakura rwaaiva narwo pakuzadzisa murayiro waMwari wekuti: “Berekai muwande, muzadze nyika, muikurire, muve nesimba pahove . . . nepazvisikwa zvinobhururuka . . . nepazvisikwa zvose zvipenyu zvinofamba panyika.” (Gen. 1:28) Pane kudaro, akasarudza kudarika miganhu yaakaisirwa naMwari paakadya muchero waakanga arambidzwa. Mashandisiro asina kunaka aakaita rusununguko rwekusarudza akaita kuti vanhu vese vatambure uye varwadziwe kusvika nhasi. (VaR. 5:12) Kuziva kuti chisarudzo chakaitwa naAdhamu chakaguma nei kunofanira kuita kuti tide kushandisa zvakanaka rusununguko rwedu rwekusarudza tisingadariki miganhu yakaiswa naJehovha.
9. Jehovha akaita kuti vanhu vake, vaIsraeri, vasarudze chii uye vakaita sei?
9 Kusateerera kwaAdhamu naEvha kwakaita kuti chivi nerufu zvipararire kuvanhu vose. Zvisinei, vanhu vakaramba vaine kodzero yekushandisa rusununguko rwekusarudza. Izvi zvinooneka pane zvakaitwa naMwari kuvaIsraeri. Achishandisa mushumiri wake Mosesi, Jehovha akapa vaIsraeri mukana wekusarudza kubvuma kana kuramba ropafadzo yekuva pfuma yake chaiyo. (Eks. 19:3-6) Vanhu vacho vakaita sei? Vakazvisarudzira vega kuita zvinotarisirwa kuvanhu vezita raMwari uye vese vakataura kuti: “Tinoda kuita zvose zvataurwa naJehovha.” (Eks. 19:8) Zvinosuwisa kuti nekufamba kwenguva vaIsraeri havana kushandisa zvakanaka rusununguko rwavo rwekusarudza uye havana kuita zvavakanga vavimbisa. Tinogona kuwana chidzidzo chinokosha pane zvavakaita. Ngatirambei tichikoshesa chipo chedu cherusununguko rwekusarudza toramba tiri pedyo naJehovha tichiteerera mirayiro yake.—1 VaK. 10:11.
10. Mienzaniso ipi inoratidza kuti vanhu vane chivi vanokwanisa kushandisa rusununguko rwekusarudza kuti vakudze Mwari? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
10 Muchitsauko 11 chaVaHebheru, tinowana mazita 16 evashumiri vaMwari vakashandisa zvakanaka rusununguko rwavo rwekusarudza vasingadariki miganhu yaJehovha. Izvozvo zvakaita kuti vawane makomborero akakura uye vave netariro yeramangwana. Semuenzaniso, Noa akaratidza kuti aiva nekutenda kwakasimba uye akasarudza kuteerera mirayiridzo yaMwari yekuvaka areka kuti achengetedze mhuri yake. (VaH. 11:7) Abrahamu naSara vakateerera Mwari nemwoyo wose ndokuenda kunyika yakavimbiswa. Kunyange pashure pekunge vafamba rwendo urwu rwakareba, vaiva “nomukana wokudzokera” kuguta rakabudirira reUri. Asi vakaramba vakaisa pfungwa dzavo ‘pakuzadzika kwezvipikirwa zvaMwari’ uye vakanga ‘vachivavarira kuwana nzvimbo iri nani.’ (VaH. 11:8, 13, 15, 16) Mosesi akaramba pfuma yeIjipiti, “achisarudza kuitirwa zvakaipa pamwe chete nevanhu vaMwari panzvimbo pokufadzwa nechivi kwenguva duku.” (VaH. 11:24-26) Ngatitevedzerei kutenda kwevashumiri ivavo vekare kuburikidza nekukoshesa chipo chedu cherusununguko rwekusarudza, tochishandisa kuti tiite kuda kwaMwari.
11. (a) Chikomborero chipi chikuru chatinowana patinoshandisa rusununguko rwedu rwekusarudza? (b) Chii chinoita kuti ude kushandisa zvakanaka rusununguko rwako rwekusarudza?
11 Kunyange zvazvo zvingaita sezviri nyore kuti mumwe munhu atisarudzire zvekuita, hatizowani chimwe chikomborero chikuru chinobva pakuzvisarudzira. Chikomborero ichocho chinotaurwa pana Dheuteronomio 30:19, 20. (Verenga.) Vhesi 19 inoratidza kuti Mwari akapa vaIsraeri rusununguko rwekusarudza zvavaida. Muvhesi 20 tinodzidza kuti Jehovha akavapa mukana wekuratidza kuti vainyatsomuda here. Nesuwo tinogona kusarudza kushumira Jehovha. Vavariro yedu huru inofanira kuva yekushandisa chipo chatakapiwa naMwari cherusununguko rwekusarudza kuti timukudze uye kuti tiratidze kuti tinomuda.
USASHANDISA RUSUNUNGUKO RWAKO RWEKUSARUDZA ZVISINA KUNAKA
12. Chii chatisingambofaniri kuita nechipo cherusununguko rwekusarudza?
12 Ngatiti wakapa shamwari yako chipo chinokosha. Waizonzwa sei kudai waizoziva kuti shamwari yako yakakanda chipo ichocho mubhini, kana kuti yakachishandisa kukuvadza vamwe? Zvaizokurwadza zvikuru. Chifunga kuti Jehovha anonzwa sei paanoona vanhu vakawanda vachishandisa rusununguko rwavo rwekusarudza nenzira isina kunaka, vachitokuvadza vamwe. Ndizvo zvakafanotaurwa neBhaibheri kuti “mumazuva okupedzisira” vanhu vaizova “vasingaongi.” (2 Tim. 3:1, 2) Ngatisamboshandisa zvisina kunaka chipo ichi chinokosha chatakapiwa naJehovha kana kuchiona sechisingakoshi. Asi tingadzivisa sei kushandisa chipo ichi zvisina kunaka?
13. Tingadzivisa sei kushandisa rusununguko rwedu zvisina kunaka?
13 Tose tine rusununguko rwekusarudza shamwari, mapfekero, zvitayera zvebvudzi kana kupoda-poda, uye zvinotivaraidza. Asi rusununguko rwedu runogona kuita “sechinhu chokufukidzisa zvakaipa” kana tikasarudza kuva varanda vezvido zvedu zvenyama kana kuti tikatevedzera zvitayera zvefashoni zvinonyadzisa. (Verenga 1 Petro 2:16.) Pane kushandisa rusununguko rwedu “sechinhu chokuzvipembedza nacho chenyama inotadza,” ngatiitei zvese zvatinogona kuti tiite zvisarudzo zvichatibatsira kutevedzera zano reBhaibheri rinoti: “Itai zvinhu zvose kuti Mwari akudzwe.”—VaG. 5:13; 1 VaK. 10:31.
14. Kuvimba naJehovha kunobatana papi nekushandisa rusununguko rwedu rwekusarudza?
14 Imwe nzira yekuchengetedza nayo rusununguko rwedu rwekusarudza ndeyekuvimba naJehovha uye kubvuma kutungamirirwa naye tisingadariki miganhu yaakatiisira. Ndiye ega ‘anotidzidzisa kuti tibatsirwe, uye anotifambisa panzira yatinofanira kufamba nayo.’ (Isa. 48:17) Tinofanira kubvuma chokwadi chakafemerwa chekuti: “Nzira yomunhu wepanyika haisi yake. Munhu anofamba haakwanisi kudzora nhanho dzake.” (Jer. 10:23) Ngatisambofa takavimba nekunzwisisa kwedu sezvakaita Adhamu uye vaIsraeri vaipandukira Mwari. Pane kudaro, ‘ngativimbei naJehovha nemwoyo yedu yose.’—Zvir. 3:5.
KUREMEKEDZA RUSUNUNGUKO RWEKUSARUDZA RWEVAMWE
15. Tinodzidzei pana VaGaratiya 6:5?
15 Tinofanirawo kuremekedza kodzero ine vamwe yekusarudza zvavanoda muupenyu. Nei tichifanira kudaro? Sezvo tese tiine chipo cherusununguko rwekusarudza, hapana vaKristu vaviri vachagara vachingoita zvisarudzo zvakafanana. Izvi zvakadaro kunyange pamaitiro avo uye panyaya dzekunamata. Yeuka pfungwa iri pana VaGaratiya 6:5. (Verenga.) Patinonzwisisa kuti muKristu wese “achatakura mutoro wake,” ticharemekedza kodzero ine vamwe yekushandisa chipo chavo cherusununguko rwekusarudza.
Tinogona kuita zvisarudzo zvedu tisingamanikidzi vamwe kuita zvinodiwa nehana yedu (Ona ndima 15)
16, 17. (a) Nyaya yerusununguko rwekusarudza yakava sei hombe muungano yeKorinde? (b) Pauro akagadzirisa sei nyaya yacho, uye izvi zvinotidzidzisei nezvekodzero dzevamwe?
16 Ona muenzaniso wemuBhaibheri unoratidza kuti nei tichifanira kuremekedza rusununguko rwekusarudza rwehama dzedu pazvinhu zvine chekuita nehana. VaKristu vemuKorinde vakapesana nenyaya yekudya nyama yaigona kunge yakapirwa kuzvidhori yozotengeswa kumisika. Hana dzevamwe vaKristu dzaivabvumira kudya nyama yakadaro nekuti vaiziva kuti “chidhori hachisi chinhu.” Asi vamwe vaimbonamata zvidhori vaiona sekuti kudya nyama yakadaro kunenge kutori kunamata. (1 VaK. 8:4, 7) Iyi yaiva nyaya yakakura yaigona kuita kuti muungano muve nemapoka. Pauro akabatsira sei vaKristu vaiva muKorinde kuti vave nemaonero aMwari panyaya yacho?
17 Kutanga, Pauro akayeuchidza mapoka acho ari maviri kuti zvekudya zvaisazovaswededza pedyo naMwari. (1 VaK. 8:8) Akabva avanyevera kuti vasabvumira kuti “kodzero” yavo yekusarudza ive “chinhu chinogumbura vaya [vakanga] vasina simba.” (1 VaK. 8:9) Akazorayira vaya vaiva nehana dzisina kusimba kuti vasatonge vaya vaisarudza kudya nyama yakadaro. (1 VaK. 10:25, 29, 30) Saka muKristu mumwe nemumwe aifanira kusarudza zvichienderana nehana yake panyaya iyi yaikosha yaiva nechekuita nekunamata. Izvi hazvifaniri here kuita kuti tiremekedze kodzero yehama dzedu yekusarudza zvadzinoda kunyange panyaya dzisinganyanyi kukosha?—1 VaK. 10:32, 33.
18. Ucharatidza sei kuti unokoshesa chipo chako cherusununguko rwekusarudza?
18 Jehovha akatipa chipo cherusununguko rwekusarudza chinoita kuti tive nerusununguko rwechokwadi. (2 VaK. 3:17) Tinokoshesa chipo ichi nekuti chinoita kuti tiite zvisarudzo zvinoratidza kuti tinoda Jehovha. Ngatirambei tichiratidza kuti tinoonga chipo ichi chinokosha kuburikidza nekuchishandisa nenzira inoita kuti Mwari akudzwe uyewo nekuremekedza mashandisirwo achinoitwa nevamwe.
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA January 2017